Imakethe Njenge Mama Blogger | Martech Zone
Imakethe Njenge-Blogger Yomama
NgoLwesithathu, Agasti 12, 2009 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 UChris Lucas
babe ubesematheni muva nje ngenxa yokuthanda kwabo izimpahla zamahhala nezinzuzo eziza nokulandelwa kahle kwabesifazane be-pitch.
Okwenza ama-blogger omama abe yiqembu elifunwa kangaka elivela kuma-PR pros kanye nabakhangisi ukuthi bangahlanganisa amaqembu amakhulu abesifazane (ikakhulukazi), abathembela kulokho abakushoyo, bazakhele njengabaluleki abathembekile, futhi bazi ukuthi umphakathi wabo ufunani. Ngakho-ke, yini abathengisi abayifundayo kuma-blogger omama?
Intshisekelo abanayo ama-blogger omama ayinakwenziwa futhi nesifiso onaso ngebhizinisi lakho akufanele senziwe futhi. Amabhulogi aphumelele kakhulu yilawo akhiwe ngenxa yothando lwento umbhali anayo, umndeni wabo, umsebenzi wabo nomndeni, njll. Njengomakethi udinga ukuchaza ukuthi inkampani yakho ithanda ini. Izimpawu ezingama-37 wakhe abalandeli abakhulu ngokuzungezile ukuthanda kwabo isoftware elula, esebenzayo.
Umkhankaso Wokumkhankaso wakhe ithuluzi lokumaketha nge-imeyili elizungeze uthando lwama-imeyili aklanywe kahle. Noma ngabe uthando lwakho luyini, lwenze lufinyelele ekukhangiseni kwakho futhi ukhumbule, amakhasimende akho angatshela uthando lwangempela entweni ekhiqizwayo!
Ukuxhuma nabafundi babo yilokho ama-blogger omama enza kahle kakhulu. Bayazi ukuthi yiziphi izinkinobho okufanele bacindezele nokuthi bangashayela kanjani abafundi babo bathathe isinyathelo ngoba banesibopho esifanayo. Impela, akubona bonke abathengisi abangaba nesibopho esihlukile njengobumama namakhasimende abo, kepha bangathola uhlobo oluthile lwesixhumanisi esivamile.
Njengomthengisi udinga ukuqonda ukuthi amakhasimende akho adingani nokuthi ungaxhumana kanjani nawo. Noma ngabe kungokusebenzisa i- inhlolovo elula online, noma ngamanye amathuluzi aku-inthanethi njenge-Social Media, ukuthola indlela yokuxhumana namakhasimende akho kubalulekile ezweni lanamuhla lokumaketha komuntu ngamunye.
Rally for Imbangela:
Abaningi be-blogger yomama bahlanganyele ngesizathu esithile. Noma ngabe yisifo noma Amakhukhi we-Girl Scout. Njengebhizinisi uthando lwakho lungabonakala ngalokho okukholelwayo. Noma ngabe unenkinga yokwazi umphakathi noma imbangela yamathuluzi alula, asebenza kangcono, ungahlanganisa amakhasimende akho kanye nabathengi abangaba khona futhi ubenze abameli bakho bomkhiqizo abakhelwe enkolelweni eyabiwe.
Njengoba kunjalo, iSalesforce yaziwa ngokushesha njengeNo Software CRM futhi manje inezinkampani ezingama-59,000 njengabasebenzisi besixazululo sabo. Baphume bashwiba ngezixazululo ze-CRM eziboshiwe kumaseva wenkampani kanye ne-CRM enentando yeningi ngokukuvumela ukuthi ufinyelele ku-database yakho noma yikuphi emhlabeni.
Ethos wakhe umkhiqizo wamanzi ezungeze imbangela - amanzi ahlanzekile ezingane - futhi wayisiza ukuthi ifinyelele ukusatshalaliswa Starbucks. Uma uthenga i-Ethos uyithenga ngenkolelo yokuthi izingane kufanele zibe namanzi ahlanzekile. Umkhiqizo wakho udinga ukumela okuthile okuzogqama, kodwa khumbula uma umela yonke into ongeke umele noma yini… ngakho-ke khetha ngokuhlakanipha.
Ama-Deadbeats akhonjisiwe? I-Twitter - Ithuluzi Elisha Lokuphatha le-AP